Gaazexxeessaa OMN Mahaammad Siraaj mana hidhaatii wabiin hiikamuunm barame. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGaazexxeessaa OMN Mahaammad Siraaj mana hidhaatii wabiin hiikamuunm barame.
Gaazexxeessaa OMN Mahaammad Siraaj mana hidhaatii wabiin hiikamuunm barame.
OMN: (Hagayya 28, 2020) Gaazexxeessaa OMN Mahaammad Siraaj mana hidhaatii wabiin hiikamuunm barame.
Manni murtii Federalaa amma ammatti yakki Gaazexxeessaa Mahaammad Siraaj irratti dhihaate tokko illee hin jiru jechuun wabiin akka hiikamu murteesse.
Abbaa alangaa gama isaatiin Gaazexxeessaa Mahaammad Siraaj galmee Jawar Mahaamad faa jalattiin himachuu barbaada jedhee guyyaa qorannoo dabalataa gaafate.
Manni murtii gaaffi abbaa alangaa fudhachuu kuffisuun Mahaammad waabiin akka wabiin hiikamu murteesse.
Injiner Simenyew Bekele akkamitti ajjeefame?
Guyyaa du’a isaa guyyaa sadi dura Abiy Ahmad waajjiratti waamee dhimma hiddaasee giddibii irratti dubbatan. Raawwii hojii irrattis waliif hin galle. Injinarichi gaazexeessitoota qabadhee gara Giddibiin jiru deema jedheen. Abiy dideen. Kana booda waayee hiddaase goddibii kanaa irratti miidiyaaf ibsa hin kenniin jedheeni. Ibsa kennuu Kan danda’u komunikeeshinii mootummaa Obbo Ahmed Shideeti malee si miti jedheeni. Ati rakkoo hiddaasee giddibii kana ni dhoksita waan taheef jedheen.
Injinarichis erga mootummaan murteessee hin dubbadhu ani hojii kiyya hojjedha galatoomaa jedhee masaraa bahee gale. Guyyaa itti aanutti miidiyaan dhimma hiddaasee giddibii kana gaafachuuf itti bilbillaan akka hin dubbanne na dhorkaniiru warra ministeera komunikeshinii mootummaa gaafadhaa jedheeni. Fakkenyaaf BBC Amharic waliin gaaffiif deebii isaa caqasaa. Kana gidduutti Abiy hiriyoota isaa qabatee gara Ameerikaa deeme.
Ameerikaa taa’ee ajaja dabarse. Gareen basaasaa warra Ertiraa dhufan kan amma Republican Guard keessa jiran waliin walta’uun Injinerichi akka ajjeesaniif kadhimaman. Injinar Simmanyew ganama hirribaa ka’ee ciree nyaatee, buna dhugee huccuu isaa qopheeffatee shaanxaatti naqatee gara hojii deemuuf yoo jedhu namni deeninnatii irra hojjetu kan isattis dhiyaatu tokko bilbileefii gadi waame. Nan deebi’a ilmaan isaan jedhee konkolaataa isaatiin bahe. Ganamuma san Addabaabayii masqalaatti konkolaataa isaa keessatti ajjeefamee reeffi isaa argame.
Poolisiin Federallaa ganama gaafas namatu konkolaataa keesaatti ajjeese jedhee gabaase. Erga Abiy Ameerikaa galee booda qorannoo jedhanii of ajjeese jedhanii waan soba ta’e bu’aa qorannoo dhiyeessan.Namni bakka hojii deemuuf qophaa’e, ganamaan bilbilanii gadi waamanii akkeesanii of ajjeese jechuun dhara. Hojii Abiy kana hunduu haa baru!
Poolisii Oromiyaa gaantaa waajjira Dhaabaa galata qabu.
-Guyyaa reeffi Hacaaluu waajjira dhaabaa dhufe sana akka Jawar ajjeefamuuf dhiibbaa guddaatu ture. Komaandoon Abiyyi erge kallattiin inni ajaju dhufanii rukutuuf barbaadaa turani.
Poolisoonni Oromiyaa achi turan garuu akka Jawar irra balaan hin geenye wareegama gurguddaa kaffalani. Guyyaa sana akka ta’an ta’anii lubbuu Jawar oolchaniiru.
Sababa kanaan Hoggansi poolisii Oromiyaa gantaa waajjira dhaabaa amma hojiirraa ariyamee jira. Amma hojii malee mana taa’aa jira. Sababni ittiin qoratame Jawaar irratti tarkaanfii fidhachiisuu didde Kan jedhuun hojiirraa ariyame.
Kan biroo ammoo ijoollee gaafas Jawar irratti tarkaanfiin du’aa hin fudhatamu jedhan hundi achii baasamanii bakka fagootti ramadamani. Gujii, Dambi Doolloo, Naqamtee fa’itti ariyatamaniiru. Seenaan ni baasa. Poolisoonni hoggansi bilxiginnaa waamtee sobaan Jawar irratti ragaa bahaa jennaan didanii amma mana hidhaa jiranis jiru.
Hiriira Mormii Dubartootaa Sweden magaalaa Stockholm
Tigray election is to be held in 11 days period